အဆိုတော်ယုန်လေးကတော့ သူငယ်ချင်း ရသ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာ အကူအညီများပေးပြီး “အပြင်မှာ အရင်လို ပြန်ဆုံချင်ပြီ” သူငယ်ချင်းလို့ သူရဲ့ လူမူကွန်ယက်မှာ ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်… – သတင်းထူး – Thadin Htoo
ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူငယ်ချင်းကြီး ရသ ဒီ တစ်ခါ နိုင်ငံတော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များလာခဲ့ရင် . နိုင်ငံ အကြီးကဲ များ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးချင်ပါတယ် ခင်များ . အခု ဟိုနေ့ကတင်တဲ့ ကျွန်တော့် Status လေးတွေ့ပြီး ပထမ ဆုံး မထင်တဲ့ လူ ဆက်သွားတယ် . ကျွန်တော် တော်တော် ပီတိဖြစ်သွားတယ် .အခု ဒီစာကို မရေးခင် ရသ အမေရော ရသ ကရော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . ကျေးဇူးတင် စကား တင်ပြီးပြောပေးပါဆိုလို့ တင်ချင်ဖြစ်ပါသည် .ကို Sai Sai Kham Leng ငါကူတာ မပြောပါနဲ့ ကွာဆိုပြီး ၁၀ သိန်း ကူသွားပါတယ် .
နောက်၂ ယောက် ငါတက်နိုင်သလောက်ကူတာ သူကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ် ဆိုပြီး Example ထွန်းထွန်း ၁သိန်း . သက်အောင် ၅ သောင်း ကူသွားပါတယ် .သူရဲ့ အချစ်ဆုံး ညီမ တပည့်တွေလိုလည်း ပြောလို့ရပါတယ်.အများကြီး ကူချင်တာပါ .
Covid မှာ အကုန် အဆင်ပြေသလိုဖြတ်သန်း နေရလိုပါဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့Jenny2သိန်း . Sandy Myint Lwin 1 သိန်းNay Win SNARE 1သိန်းPhyo Lay SNARE 1 သိန်းAh Boy2သိန်းG Fatt3သိန်းNo က ရတနာလင်း 1 သိန်း Nay Lin Aung I Ph 1 သိန်းMandalay က ရသ ပရိတ္သတ္ပါ ဆိုၿပီး Tootti Henry လက်ဝှေ့ 1 သိန်း ကူသွားပါတယ် .အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ရသက ပြောပေးပါလို့ ပြောပါတယ် ခင်များ .Kyaw Htut Swe နဲ့ Lin Bin Hein. Jouk Jackကလည်း အမြဲ တန်း သူတို့ကြုံသလိုကူပါတယ် ခင်များ .အားလုံး ကို အထူးကျေးဇူးပါ .ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းကြီး လိမ်မာနေပါပြီဒီတစ်ခေါက် နိုင်ငံတော်က လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် လာရင် အပြင် မှာ အရင်လို ပြန်ဆုံချင်ပြီ
Yone lay လူမူကွန်ယက်
အဆိုတော် ရသ အတွက် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…